“अपाङ्गताको आँशुले भिजेको उपेक्षित दम्पति” « SaighaliKhabar.com | सैघालीखबर डट कम
“अपाङ्गताको आँशुले भिजेको उपेक्षित दम्पति”
July 6, 2019 मा प्रकाशित
टेक बहादुर पुन,।
घरपरिवारको आधार नै थला परेपछीको अवस्था सायद भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । धुरी खाँबो जिर्ण बन्दै जाँदा घरको छानो जोगाउने जिम्मेवारी बोकेको मान्छे अपत्यारिलो भुमरीमा परेपछि सम्भवत पारिवारिक अवस्था झन विकराल बन्दै जान्छ नै । यस्तै पिडाले थलिएको छ दाङ लमहीको एक दम्पति । ३६ बर्षिय दुवाडे चौधरी बिगत २ बर्ष अघि रूखबाट खस्दा गर्धन भाँचिएपछि थप पिडाले जेलिएका हुन् ।
अपाङ्गता जीवन बिताईरहेका दाङ्गको लमही नगरपालिका वडा नम्बर ५ कोलही निवासी दुवाडे चौधरी र उनका श्रीमती अत्रामी चौधरीको पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नु बाहेक अर्को बिकल्प पनि कहाँ छर ?
मिस्त्रि काम गरेरै घरपरिवार चलाईरहेका चौधरी सधैं ओछ्यानको भर परेपछि यी दम्पतीलाई कम्ती पीडा परेको छैन ।
२ छोराकि आमा अत्रामि भन्छिन् न बुढाको उपचार हुन्छ, न त ओछ्यान भन्दा बाहिरै जान सक्छन् । उपचारका लागि ऋण गरेर अस्पताल सम्म नपुर्‍याइएको पनि होइन । उपचार सम्भव छैन भनेर डाक्टरले फर्काइदिएपछि अन्त लाने कुरै भएन ।
चौधरीलाई बाहिर भित्र गर्नपनि दोस्रो ब्यक्तिको सहारा चाहिन्छ । घरका कोही सदश्य अपाङ्गता भएपछि स्वत अन्य सदश्य बाट अपहेलनाको सिकार बन्छन् नै । तर, निकै दुखदायि जीवन बिताईरहेका चौधरीलाई उनका जीवन सङ्गिनि ३२ बर्षिय अत्रामिले अपहेलना हैन, अौधि माया गर्छिन । बिगत १९ बर्ष पहिले बिबाह बन्धनमा बाँधिएका चौधरीको जोडिलाई दैबले बज्रपात पारेपनि बाँकि जीवन सुख दुख सँगै जिउने कोसिसमा छन ।
चौधरीको जस्तै पीडा लमही ६ देउपुर निवासी ३२ बर्षिय बिष्णु परियारको पनि छ । करिब १० बर्ष पहिले गाडि दुर्घटनामा परि परियार ह्विलचेयरको सहारामा पुगेका हुन् । त्यस्तै लमही ८ बिजुलिपुरका गहनलाल चौधरी पनि अपाङ्गता जीवन बिताईरहेका छन् । यी सबै दृष्य समावेशी अपाङ्ग संघ दाङले बिहिबार लमहीमा गरेको एक कार्यक्रममा देखिका हुन ।
लमही नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा अपाङ्ग भएका व्यक्तीहरुलाई समुदायमा आधारित पूर्नस्थापना दुईदिने सि।वि।आर कार्यक्रममा कोही आमाको काखमा बसेर वटारिएका देखिए । कोही बोल्न खोजिरहे जस्ता देखिए तर उसको मुखबाट बोलीको लवज फुट्दैन, बरु आखाँबाट आशुका ढिक्का झरेको देखियो । सामान्य जस्ता अरुहरुमा पनि कुनै न कुनै रुपले कमजोर सामर्थ्य भएका देखिए । अपाङ्गता जीवन बिताईरहेका उनिहरूको जीवन कम्ति सास्ति छैनर!
नगरस्तरका ४१ जना अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्ति हरूको उपस्थित रहेको कार्यक्रममा सरकारले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूको लागि गरेका काम कर्तब्यका बारेमा बिष्लेशन गरिएको थियो । सामाजिक रुपमा अपाङ्ग भएका व्यक्तीहरुमा पहुँचको वृद्धि गर्ने, अपाङ्ग भएका व्यक्तीहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ अधिकार तथा कार्यान्वयनको विधि र तरीकाको बारेमा र अपाङ्गता शिक्षा तथा स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
समावेशी अपाङ्ग संघ दाङका अध्यक्ष रामशंकर यादवको अध्यक्षता एवम् लमही नगरपालिका नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको हो ।
कार्यक्रममा समावेशी अपाङ्ग संघ दाङका अध्यक्ष रामशंकर यादव, लमही नगरपालिका महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख शान्ता पौडेल, नगरपालिका स्तरीय अपाङ्ग पचियपत्र वितरण समिति सदस्य बेनिधि धिताललगाएतले बोल्नु भएको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण समावेशी अपाङ्ग संघ दाङका सचिव जंगबहादुर नेपालीले गर्नु भएको थियो ।
दुर्गाको मूर्ति सेलाउनका लागि लगिँदै